सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति भएपछि डा. गोविन्द केसीले आज अनशन तोड्दै - pnpkhabar.com
You are at:Home»समाचार»सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति भएपछि डा. गोविन्द केसीले आज अनशन तोड्दै
सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति भएपछि डा. गोविन्द केसीले आज अनशन तोड्दै
By रिता घिसिंग on २९ पुष २०७४, शनिबार ०३:३७ समाचार
पौष २९. काठमाडौँ : सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति भएपछि डा. गोविन्द केसीले शनिबार अनशन तोड्दै हुनुहुन्छ । गएको सोमबारदेखि अनशन बसेका डा. केसीले छैठौं दिनमा अनशन तोड्न लाग्नुभएको हो । बिहान १० बजे अनशन तोड्ने कार्यक्रम छ ।